OTU ESI EDOZI NJEHIE "GPEDIT.MSC ACHỌTA" NA WINDOWS 7 - WINDOWS - 2019
Debe gpedit.msc adịghị achọta njehie na Windows 7
Mgbe ụfọdụ, mgbe ị na-agba ọsọ Nchịkọta Ndị Nchịkọta Otu A na-ekele ndị ọrụ na ihe ijuanya jọgburu onwe ha n'ụdị ozi njehie: "gpedit.msc adịghị ahụ." Ka anyị hụ ụzọ ị ga - esi dozie nsogbu a na Windows 7, ma chọpụta ihe kpatara ya.
Ebumnuche na ụzọ iji kpochapụ njehie ahụ
Njehie "gpedit.msc adịghị ahụ" na-egosi na faịlụ gpedit.msc na-efu na kọmputa gị ma ọ bụ ịnweta ya enweghịzi nkwakọba. Ihe si na nsogbu ahụ pụta bụ na ị nweghị ike ịrụ ọrụ Nchịkọta Ndị Nchịkọta Otu.
Nsogbu ozugbo nke njehie a dị nnọọ iche:
Mwepụ ma ọ bụ mebie ihe gpedit.msc n'ihi ọrụ nje ma ọ bụ ọrụ onye ọrụ;
Ntọala OS na-ezighị ezi;
Iji mbipụta Windows 7, nke gpedit.msc adịghị arụnyere na ndabara.
Paragraf ikpeazụ kwesịrị ịmatakwu ihe. Eziokwu ahụ bụ na ọ bụghị mbipụta niile nke Windows 7 ka arụpụtara mpaghara a. Ya mere, ọ nọ na ọkachamara, ụlọ ọrụ na ihe kachasị elu, ma ị gaghị achọta ya na Home Basic, Home Premium na Starter.
Ụzọ ụfọdụ maka ịmepụta njehie "gpedit.msc a naghị achọta" dabere na ihe kpatara ya, mbipụta nke Windows 7, yana ike usoro (32 ma ọ bụ 64 ibe n'ibe). A ga-akọwa nkọwa nke ụzọ dị iche iche iji dozie nsogbu a n'okpuru.
Usoro 1: Wụnye gpedit.msc mpaghara
Nke mbụ, ka anyị chọpụta otú ị ga-esi gpedit.msc akụkụ ahụ ma ọ bụrụ na enweghị ya ma ọ bụ mmebi. Achi nke weghachite ọrụ Nchịkọta Ndị Nchịkọta Otubụ okwu Bekee. N'ebe a, ọ bụrụ na ị na-eji ọrụ, Ụlọ ọrụ ma ọ bụ mbipụta kachasị elu, ọ ga-ekwe omume, tupu itinye akara ngosi ugbu a, ị ga-anwa iji dozie nsogbu ahụ site na iji ụzọ ndị ọzọ, nke akọwapụtara n'okpuru.
Ná mmalite, anyị na-atụ aro ka ị mepụta ebe ịmeghachi ihe ndabere ma ọ bụ weghachi ya. Ị na-eme ihe niile na nsogbu gị na ihe ize ndụ gị, ya mere, iji zere ihe ndị na-adịghị mma, ịkwesịrị ịdobe onwe gị ka ị ghara ịkwa ụta maka ihe ọ ga-esi na ya pụta.
Anyị na-amalite akụkọ nke usoro ntinye mpempe akwụkwọ ahụ na nkọwa ahụ algorithm nke omume na kọmputa sitere na OS Windows 32-bit OS 7.
Download gpedit.msc patch
Nke mbụ, weghachite ebe nchekwa ahụ site na njikọ dị n'elu site na saịtị mmepụta ihe. Wepu ya ma gbanye faịlụ ahụ "setup.exe".
Na-emeghe "Wizard Wụnye". Pịa "Na-esote".
Na windo na-esote ịkwesịrị ikwenye na ịpalite nke nwụnye site na ịpị "Wụnye".
Usoro nhazi ahụ ga-arụ.
Iji mezue ọrụ, pịa "Emecha" na windo Wizards Wụnye, nke a ga-akọ banyere mmezigharị nke usoro nhazi.
Ugbu a mgbe arụ ọrụ Nchịkọta Ndị Nchịkọta Otu kama nke njehie, ngwá ọrụ dị mkpa ga-arụ ọrụ.
Usoro nke iwepụ njehie na OS 64-bit dịtụ iche na nhọrọ ahụ dị n'elu. N'okwu a, ị ga-arụ ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ.
Mee ihe niile dị n'elu ruo na ise ise. Mgbe ahụ mepee "Explorer". Pịnye ụzọ na-esote ya n'ime ụlọ nkwụsị ya:
Pịa Tinye ma ọ bụ pịa akụ ahụ gaa n'aka nri nke ubi ahụ.
Na-agagharị na ndekọ ahụ "SysWOW64". Na-ejide bọtịnụ ahụ Ctrl, jiri aka pịa bọtịnụ aka ekpe ahụ (Paintwork) site ndekọ aha "GPBAK", "GroupPolicyUsers" ma "GroupPolicy", yana aha aha ahụ "gpedit.msc". Wee pịa bọtịnụ ahụ na nhọrọ bọtịnụ ziri ezi (PKM). Họrọ "Detuo".
Mgbe nke ahụ gasịrị n'igbe nkwụsị "Explorer" pịa aha "Windows".
Na-aga na ndekọ "Windows"gaa ndekọ "System32".
Ozugbo na nchekwa ahụ dị n'elu, pịa PKM maka ebe ọ bụla na-adịghị na ya. Na menu, họrọ nhọrọ Tapawa.
O yikarịrị ka otu igbe na-emepe nke ị ga-achọ iji gosipụta omume gị site na ịpị ihe ntinye Detuo na Dochie.
Mgbe ịmechara ihe ahụ ma ọ bụ ọbụna karịa ya, ọ bụrụ na ndị edeturu ihe na ndekọ ahụ "System32" agaghị anọ na ya, igbe ọzọ ga-emepe. N'ebe a, ị ga-ekwesikwa ikwupụta atụmatụ gị site na ịpị "Nọgidenụ n'ihu".
Na-esote, banye na ntanetị "Explorer" okwu:
% WinDir% / Temp
Pịa akụ ahụ gaa n'aka nri nke ebe nkesa, ma ọ bụ pịa Tinye.
Na-aga na ndekọ ebe echekwara ihe na-adịru nwa oge, chọọ ihe ndị nwere aha ndị a: "gpedit.dll", "appmgr.dll", "fde.dll", "fdeploy.dll", "gptext.dll". Jide igodo Ctrl wee pịa Paintwork maka nke ọ bụla n'ime faịlụ ndị dị n'elu iji họrọ ha. Ekem pịa na nhọrọ PKM. Họrọ site na menu "Detuo".
Ugbu a na n'elu window "Explorer" gaa n'aka ekpe nke ebe adreesị, pịa ihe ahụ "Azụ". Ọ nwere ọdịdị nke akụ na-eche aka ekpe.
Ọ bụrụ na ịmeela ihe niile edere edepụtara na usoro a kapịrị ọnụ, wee laghachi na nchekwa ahụ "System32". Ugbu a ọ na-anọgide na pịa PKM site na ebe efu na ndekọ a na n'ime ndepụta họrọ nhọrọ Tapawa.
Kwenye ihe omume na igbe ahụ ọzọ.
Weghagharịa kọmputa ahụ. Mgbe ị malitegharịrị, ịnwere ike ịgba ọsọ Nchịkọta Ndị Nchịkọta Otu. Iji mee nke a, pịnyere nchikota Nweta + R. Ngwaọrụ ahụ ga-emeghe Gbaa ọsọ. Tinye iwu na-esonụ:
N'ọtụtụ ọnọdụ, ngwá ọrụ kwesịrị ekwesị ga-amalite. Ma ọ bụrụ na ị ka nwere njehie, mezie usoro niile iji wụnye ihe nkwụnye ahụ ruo ntinye 4. Ma na window windo na "Wizard Wụnye" bọtịnụ "Emecha" ịpịla, ma meghee "Explorer". Tinye okwu ndị na-esonụ na ebe nkesa:
% WinDir% / Temp / gpedit
Pịa na ntughari ntughari gaa n'aka nri nke ogwe adreesị.
N'otu oge na ndekọ ziri ezi, dabere n'ogo omimi nke sistemụ arụmọrụ, pịa okpukpu abụọ Paintwork na ihe "x86.bat" (maka 32-bit) ma "x64.bat" (maka 64-bit). Gbalịa ịmegharị ọzọ. Nchịkọta Ndị Nchịkọta Otu.
Ọ bụrụ aha profaịlụ nke ị na-arụ ọrụ na PC gị nwere ogheremgbe ọbụla mgbe ọnọdụ niile dị n'elu ga-ezute mgbe ị na-agba ọsọ Nchịkọta Ndị Nchịkọta Otu njehie ga-eme, n'agbanyeghị otú obere usoro gị dị. N'okwu a, iji nwee ike ịgba ọsọ ngwaọrụ, a chọrọ ụdị usoro.
Na-arụ ọrụ nrụnye niile ruo na gụnyere isi 4. Gbanwee ndekọ "Gpedit" otu dị ka n'elu. N'otu oge na ndekọ a, pịa PKM na ihe "x86.bat" ma ọ bụ "x64.bat", dabere na OS bit. N'ime ndepụta, họrọ ihe ahụ "Gbanwee".
Ihe ederede ederede nke ihe a choputara na Notepad mepee. Nsogbu bụ na "Iwu Iwu"nhazi oghere anaghị aghọta na okwu nke abụọ dị na akaụntụ ahụ bụ n'ihu aha ya, ma were ya na ọ bụ mmalite nke ìgwè ọhụrụ. Iji "kọwaa" "Iwu iwu", otu esi aguta ọdịnaya nke ihe ahụ n'ụzọ ziri ezi, anyị ga-eme obere mgbanwe na koodu ahụ.
Pịa na menu Notepad. Dezie ma họrọ otu nhọrọ "Dochie ...".
Mpido ahụ malitere. "Dochie". N'ọhịa "Gịnị" tinye:
% aha njirimara%: f
N'ọhịa "Gịnị" tinye okwu na-esonụ:
"% Aha njirimara%": f
Pịa "Dochie Nile".
Mechie windo "Dochie"site na ịpị bọtịnụ dị nso n'akụkụ nkuku.
Pịa na menu Notepad. "Njikwa" ma họrọ "Chekwa".
Mepee Izu Izu ma laghachi na ndekọ. "Gpedit"ebe ihe a na-enweghị ike ịchọta. Pịa ya PKM ma họrọ "Na-agba ọsọ dị ka onye nlekọta".
Mgbe e mechara faịlụ ahụ, ị ​​nwere ike pịa "Emecha" na windo Wizards Wụnye ma gbalịa ịrụ ọrụ Nchịkọta Ndị Nchịkọta Otu.
Usoro 2: Detuo faịlụ site na GPBAK ndekọ
Usoro na-esonụ nke iweghachi ihe gpedit.msc mebiri ma ọ bụ mebiri emebi, yana ihe ndị metụtara ya, dị mma naanị maka Windows 7 Professional, Enterprise and Ultimate editions. Maka mbipụta ndị a, nhọrọ a dị mma karịa ịmezi njehie site na iji ụzọ mbụ, ebe ọ bụ na ọ na-etinye obere ihe ize ndụ, ma a ka nweghị ihe ga-eme ka a rụpụta ihe dị mma. A na-eme usoro mgbake a site na ịpụta ọdịnaya nke ndekọ ahụ. "GPBAK"ebee ka ndabere ihe mbụ "Editor" ka klas "System32".
Meghee "Explorer". Ọ bụrụ na ịnwe osịrị 32-bit OS, wee pịnye okwu ndị na-esonụ na ebe ntanetị:
% WinDir% System32 GPBAK
Ọ bụrụ na ị na-eji mbipị 64-bit, tinye koodu ndị a:
% WinDir% SysWOW64 GPBAK
Pịa akụ na nri nke ubi.
Họrọ ọdịnaya niile nke ndekọ ahụ ị nọ. Pịa na nhọrọ PKM. Họrọ otu ihe "Detuo".
Wee pịnye na nkwụnye ihe nkesa ahụ "Windows".
Na-esote, chọta nchekwa ahụ "System32" ma banye n'ime ya.
Na ndekọ mepere emepe, pịa PKM maka ebe ọ bụla efu. Na menu, họrọ Tapawa.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, gosi ihe ntinye ahụ site na iji dochie faịlụ niile.
Na ụdị ụdị okwu ọzọ, pịa "Nọgidenụ n'ihu".
Weghachite PC ma gbalịa ịmepụta ngwá ọrụ ahụ achọrọ.
Usoro nke 3: Lelee iguzosi ike n'ezi nke os os
Nyere na gpedit.msc na ihe niile metụtara ya bụ ihe dị n'ime usoro, ọ ga-ekwe omume iweghachi ahụ ike Nchịkọta Ndị Nchịkọta Otu site na ịba uru "SFC"ezubere iji nyochaa iguzosi ike n'ezi ihe nke faịlụ nke Os ma weghachite ha. Ma nhọrọ a, dị ka nke gara aga, na-arụ ọrụ nanị na Ọkachamara, Ụlọ ọrụ na Ntaneti kachasị elu.
Pịa "Malite". Bata "Mmemme niile".
N'ime ndepụta, chọta ihe ahụ "Iwu Iwu" ma pịa ya PKM. Họrọ "Na-agba ọsọ dị ka onye nlekọta".
Ga-amalite "Iwu Iwu" ya na ikike onye nchịkwa. Tinye ya:
Na-amalite usoro maka ịlele faịlụ os, gụnyere gpedit.msc, ọrụ "SFC". E gosipụtara usoro nke igbu ya dị ka pasent na windo ahụ.
Mgbe agwusiri ya, ozi ga-apụta na windo na-ekwupụta na achọtala faịlụ ndị mebiri emebi ma nwetaghachi. Ma ọ pụkwara ịpụta na njedebe nke nlele na utọ ahụ achọtala faịlụ ndị mebiri emebi, ma enweghị ike idozi ụfọdụ n'ime ha.
Na ikpe ikpe a, ọ dị mkpa iji nyochaa ịba uru. "SFC" site "Iwu Iwu" na kọmputa na-agba n'ime "Ọnọdụ Nchekwa". Ọzọkwa, ikekwe, draịvụ ike anaghị echekwa akwụkwọ nke faịlụ ndị dị mkpa. Mgbe ahụ, tupu ịgụ isiokwu, ọ dị mkpa ịtinye diski diski Windows 7 n'ime ụgbọala, bụ nke esiri arụ ọrụ os.
Nyocha maka maka iguzosi ike n'ezi nke os os na Windows 7
Kpọọ "akara iwu" na Windows 7
Usoro 4: Weghachite System
Ọ bụrụ na ị na-eji Usoro Ọkachamara, Ụlọ ọrụ na nke kachasị elu na ị nwere usoro mgbake os na kọmputa gị, kere tupu njehie amalite ịpụta, ya bụ, ọ bụ ihe ezi uche dị na iji weghachite ọrụ niile nke Os na ya.
Gaa "Malite" ka nchekwa "Ụdị". Otu esi eme nke a, kọwara mgbe ị na-atụle ụzọ gara aga. Wee tinye ndekọ ahụ "Ọrụ".
Pịa na "Nweghachi usoro".
Window nke ọrụ ntanetị nke usoro ga-amalite. Pịa "Na-esote".
A windo mepee na ndepụta nke ihe mgbake. Enwere ike inwe ọtụtụ. Maka nchọta zuru ezu, lelee igbe dị n'akụkụ "Gosi ihe ndị ọzọ eweghachite". Họrọ nhọrọ nke e guzobere tupu njehie apụta. Họrọ ya wee pịa "Na-esote".
Na windo na-esote, iji malite usoro mgbake usoro, pịa "Emere".
Kọmputa ga-amalitegharịa. Mgbe usoro mgbake zuru ezu, nsogbu na njehie anyị na-amụ kwesịrị ịkwụsị.
Usoro 5: Wepụ Virus
Otu n'ime ihe kpatara njehie "gpedit.msc ahụghị" nwere ike ịbụ ọrụ ịrịa ọrịa. Ọ bụrụ na anyị si n'echiche ahụ na koodu ọjọọ ahụ abanyewo n'ime usoro ahụ, ọ dịghị ihe dị mkpa iji nyochaa ya na ngwanrọ nje virus ọ bụla. Maka usoro a, ịkwesịrị iji ụlọ ọrụ pụrụ iche, dịka ọmụmaatụ, Dr.Web CureIt. Ma ọbụna na-eji mmemme ndị ọzọ nke na-adịghị enye ha nkwụnye, ọ ka mma ịlele nje virus site na kọmputa ọzọ ma ọ bụ site na ịpị site na LiveCD ma ọ bụ LiveUSB. Ọ bụrụ na ọrụ ahụ achọpụta nje, mgbe ahụ, ị ​​ga-agbaso ndụmọdụ ya.
Ma ọbụna nchọpụta na nhichapụ nje ahụ nke dugara na njehie anyị na-amụ adịghị ka ekwenye na ịlaghachi ọrụ. Nchịkọta Ndị Nchịkọta Otu, dịka faịlụ faịlụ nwere ike imebi ya. N'okwu a, mgbe ịpụpụsịrị, ị ga-arụ usoro mgbake na iji otu n'ime algọridim nke ụzọ ndị a kọwara n'elu.
Usoro 6: Reinstall sistemụ arụmọrụ
Ọ bụrụ na otu n'ime ụzọ ndị a enyereghị gị aka, mgbe ahụ naanị ụzọ ị ga-esi dozie ọnọdụ ahụ bụ iji dozie usoro sistemụ ahụ. Usoro a dịkwa mma maka ndị ọrụ ahụ anaghị achọ ọgba aghara na ntọala dị iche iche ma rụkwaa ọrụ dị iche iche, ma na-ahọrọ iji dozie nsogbu ahụ na otu ọkpụkpụ dara ada. Ọzọkwa, usoro a dị mkpa ma ọ bụrụ na a chọghị "gpedit.msc" ahụ, ọ bụghị naanị nsogbu na kọmputa.
Ka ị gharazie ịnagide nsogbu ahụ akọwapụtara na isiokwu a, jiri nkuku nwụnye maka Windows 7 Ọkachamara, Ụlọ ọrụ ma ọ bụ Nzuzu, mana abụghị Basic Home, Home Premium ma ọ bụ Starter maka nwụnye. Tinye usoro mgbasa ozi os na mbanye na malitegharịa kọmputa. Ọzọ, soro ndụmọdụ ndị a ga-egosipụta na nyocha. Mgbe ị wụnye osịrị os dị mkpa, nsogbu ahụ na gpedit.msc ga-apụ n'anya.
Dị ka ị nwere ike ịhụ, ịhọrọ ụdị usoro dị mfe na nke dị ugbu a iji dozie nsogbu ahụ na njehie "gpedit.msc adịghị achọta" na Windows 7 na-adabere n'ọtụtụ ihe. Ndị a na-agụnye nyochagharị nke sistemụ arụmọrụ na ike ya, tinyere ihe kpatara nsogbu ahụ ozugbo. Enwere ike iji ụfọdụ n'ime nhọrọ ndị dị na isiokwu a mee ihe n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okwu niile, ebe ndị ọzọ na-adabara naanị maka ọnọdụ ụfọdụ.